२७ भदौ - सन् २०११ मा इण्डोनेसियाको एउटा ६ वर्षीय बाँदरले एक व्यक्तिले ट्राइपडमा राखेको क्यामेराको लेन्समा अनुहार पुर्‍याएर बटन थिच्यो। क्यामेरामा बाँदरको ङिच्च हाँसेको सेल्फी कैद हुन पुगेको थियो।
अफ्रिकाका जंगली कुकुर पनि भोट दिएर गर्छन् प्रजातान्त्रिक अभ्यास
२१ भदौ - हामी ठान्छौँ, मताधिकार प्रजातन्त्रको लामो लडाइँपछि मानिसले प्राप्त गरेको अधिकार हो। तर एक नयाँ अध्ययनमा अफ्रिकाका जंगली कुकुरहरुले पनि मतदान गर्ने गरेको तथ्य फेला परेको छ।
१७ भदौ - अर्जेन्टिनाको एक जेलभित्र लागुऔषध बोकेर पुर्‍याउने एउटा परेवालाई प्रहरीले गोली हानी खसाएको छ। शुक्रबार सो जेलका अधिकारीहरुले लागुऔषध ओसारपसारमा प्रयोग भएको परेवा मारिएको जानकारी दिएका हुन्।
सुनको शौचालयमा पिसाव गर्ने अन्तिम मौका
१५ भदौ - तपाईंले अरबका राज खान्दानले सुनका शौचालय वा अन्य वस्तु प्रयोग गरेको सुन्नु भएको होला। तर अफैले सुनको शौचालय प्रयोग गर्ने अवसर पाउने कहिल्यै सोच्नु भएको थियो?
१० भदौ - मुस्लिमहरुको चाड इद–अल अधा नजिकिँदै छ। यसैले भारतको पुरानो दिल्लीस्थित जामा मस्जिद नजिकैको खसी बजारमा भीडभाड लागेको छ। त्यो भीडको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ, खाटमा बसेको खसी।
सडकमा नाचेको भिडियो भाइरल भएपछि साउदीमा १४ वर्षे किशोर पक्राऊ
७ भदौ - साउदी अरबको एक व्यस्त सडकमा नाचिरहेको भिडियो भाइरल बनेपछि प्रहरीले एक १४ वर्षीय किशोरलाई गिरफ्तार गरेका छन्। ती किशोरलाई ‘सार्वजनिक स्थानमा अनुचित व्यवहार गरेको’ आरोपमा सोधपुछ गरिरहेको बताइएको छ।
चीनमा कुकुर–बिरालोलाई अक्युपञ्चर
६ भदौ - घरपालुवा कुकुर तथा बिरालोलाई चिनियाँहरुले अक्युपञ्चर सेवा दिन थालेका छन्। उनीहरुको प्रिय कुकुर तथा बिरालोका दुखाइलाई आराम दिन यो प्राचीन विधि अपनाउन थालिएको थियो।
५७ वर्षे बडिबिल्डिरले जिते स्वर्ण पदक
४ भदौ - ५७ वर्षको मानिससँग कमैले मात्र बडिबिल्डिङमा स्वर्ण पदक जित्ने अपेक्षा गर्न सक्छन्। तर चीनको सान्सी प्रान्तका एक व्यक्तिले यो काम गरेर देखाएका छन्। याङचुआन सहरका पान सिपिङले बडिबिल्डिङमा स्वर्ण पदक जितेका हुन्।
पुटिनको सिको गर्दै सर्ट खोले रुसीहरुले
३२ साउन - हालै रुसी राष्ट्रपतिले साइबेरियामा छुट्टी मनाएको फोटो संसारभर चर्चित भएको थियो। बिना सर्ट उनी माछा मारिरहेका र घाम तापिरहेका तस्वीर भाइरल बनेको थियो। त्यसैको सिको गर्दै अहिले हजारौँ रुसीहरुले सर्टबिनाको आफ्नो फोटो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिरहेका छन्।
२६ साउन - थाइल्याण्डकी एक ९१ वर्षीया वृद्धाले १० वर्ष लगाएर स्नातक पूरा गरेकी छन्। किमलान जिनाकुले युवावस्थामा विश्वविद्यालय जाने अवसर पाएकी थिइनन् तर उमेरको तौलले उनको अध्ययनको रहरलाई दबाइराख्न सकेन।
२४ साउन - ग्राहकहरुको ब्राको आकारअनुसार छुट दिने घोषणा गरेको एक चिनियाँ रेष्टुरेन्टको तीव्र आलोचना भएको छ। रेष्टुरेन्टको विज्ञापन विभेदकारी र अश्लील भएको भन्दै विरोध गरिएको छ।
१८ घण्टा उड्नुपर्दा बोइङले आकाशमै हवाइजहाजको नक्सा बनायो
२० साउन - कतै पुग्ने लक्ष्य नभएको एउटा हवाइजहाजले आकाशमै १८ घण्टा बिताउनुपरे के गर्ला? बुधबार बोइङको एउटा विमानले आकाशमै हवाइजहाजको नक्सा कोरेर १८ घण्टा बिताएको छ।
झोलुङ्गे पुलमा योग अभ्यास
१६ साउन - योग अभ्यासलाई विभिन्न कलात्मक शैलीमा प्रस्तुत गरिरहेका चिनियाँ युवतीले झोलुङ्गे पुललाई समेत प्रयोग गरेका छन्।
९ साउन - विश्वप्रसिद्ध पौडीबाज माइकल फेल्प्स १०० मिटरको स्पर्धामा अन्ततः पराजित भएका छन्। तर उनको यो पराजय कुनै मानिसविरुद्ध होइन, सार्क माछासँग हो।
पहिलो पटक चन्द्रमाको माटो ल्याइएको झोला १८ लाख डलरमा लिलामी
६ साउन - चन्द्रमामा पहिलो पाइला टेकेका निल आर्म्स्ट्रङले त्यहाँको माटोको नमुना संकलन गरेको झोला अमेरिकामा लिलामी भएको छ। चन्द्रमाको माटो र चट्टानका टुक्रा हालेर पृथ्वीमा ल्याइएको त्यो झोला न्युयोर्कमा १८ लाख डलरमा बिक्री भएको हो।
पौने तीन करोड डलरमा बिक्री भएको भाँडो
४ साउन - चीनमा एक प्राचीन भाँडो २ करोड ७३ लाख अमेरिकी डलरमा लिलामी भएको छ। कराइजस्तो देखिने २ हजार वर्ष पुरानो काँसको भाँडो गत शनिबार झेजियाङ प्रान्तको हाङ्जाउमा बिक्री भएको बताइएको छ।
सिंहले चितुवाको बच्चा स्याहारेपछि
३० असार - एक सिंहले अर्को प्रजातिको बच्चा भेटे के गर्ला? तान्जानियामा भने एक सिंहले चितुवाको बच्चा स्याहार गर्दै गरेको दृश्य क्यामरामा कैद भएको छ। यस्तो दृश्य पहिलो पटक देखिएको जनाइएको छ।
मेलबर्नबाट पर्थ पुगेको एक क्यान बियरको चर्चा
२८ असार - अष्ट्रेलियामा एक व्यक्तिले मात्र एउटा क्यान बियरलाई लगेजका रुपमा चेक इन गराएर इन्टरनेटमा चर्चा कमाएका छन्। मेलबर्नबाट क्वन्टास एयरलाइन्समार्फत ४ घण्टाको यात्रा सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्दै सो बियर पर्थ पुगेपछि यो घटना चर्चित बनेको हो।
बढी प्रशंसा गरेको भन्दै साउदीका राजाले स्तम्भकारलाई दिए सजाय
२१ असार - आफ्नो प्रशंसा गरेको सुन्न नचाहने मानिस सायदै होलान्। तर साउदी अरबका राजा सलमान बिन अब्दुलअजिजले आफ्नो अत्याधिक प्रशंसा गरेको भन्दै पत्रिकाका एक स्तम्भकारलाई निलम्बन गर्ने आदेश दिएका छन्।
ट्रम्पको नाममा इरानमा कार्टुन प्रतिस्पर्धा
२० असार - अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नाममा इरानमा कार्टुन प्रतिस्पर्धा भएको छ। सोमबार भएको सो प्रतिस्पर्धामा इरानकै हदी असादी नामक कलाकारको कार्टुन विजयी भएको छ।
साइकल बोकेर घर फर्के मोदी
१४ असार - पोर्चुगल, अमेरिका र नेदरल्याण्ड्सको भ्रमणमा गएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ती देशका नेतासँग भेटघाटका अनेकौँ मधुर सम्झनाका साथ एउटा साइकल पनि बोकेर फर्केका छन्। नेदरल्याण्ड्सका प्रधानमन्त्री मार्क रुटले मोदीलाई सो साइकल उपहार दिएका हुन्।
जब जामा लगाएर केटाहरु स्कुल पुगे
९ असार - स्कुलमा हाफ प्यान्ट लगाउन नपाइने नियमको विरोधमा एक बेलायती स्कुलका केटाहरु जामा लगाएर स्कुल पुगेका छन्। बिहीबार डेभोन काउन्टीको एक्सटरस्थित इस्का एकेडेमीका विद्यार्थीहरु जामा लगाएर स्कुल आएपछि त्यसले चर्चा पाएको हो।
भारतमा गर्भवतीलाई मांसाहार र कामेच्छाबाट टाढा रहन सल्लाह दिइएपछि
६ असार - भारतमा गर्भवती महिलालाई मासु, अण्डाजस्ता खानेकुरा र यौनको लालसाबाट टाढै बस्न सुझाव दिइएपछि त्यसको तीव्र आलोचना भएको छ। विशेषज्ञहरुले यस्तो सल्लाहलाई अवैज्ञानिक भन्दै आलोचना गरेका छन्।
बाख्रासँग योग लोकप्रिय बन्दै
१ असार - योगको लोकप्रियता बढ्दै गएपछि सन् २०१५ देखि २१ जुनका दिन विश्व योग दिवस मनाउन थालिएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीदेखि अनेकौँ धर्मगुरु योगलाई विश्वव्यापी बनाउन लागिपरेका छन्। हालै अमेरिकामा बाख्राको साथमा गरिने योग चर्चामा आएको छ।
फिल्म पूरा गर्न कान्सको ट्रफी बेच्ने निर्देशकको घोषणा
२५ जेठ - केही समयअघि म्यागासेसे पुरस्कार विजेता महावीर पुनले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोल्न आफूले जीतेको पदक बेच्ने घोषणाले नेपालमा चर्चा पाएको थियो। एक यस्तै घोषणा ट्युनिसियाली–फ्रान्सेली निर्देशक अब्देललतिफ कसिचीले पनि गरेका छन्।
१८ जेठ - स्वीट्जरल्याण्डको एक सुन्दर गाउँले पर्यटकहरुलाई गाउँको फोटो खिच्न प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। यसको कारण भने तपाईंलाई छक्क पार्ने खालको छ।
८ जेठ - थाइल्याण्डमा आफ्नो स्वभाविक तौलभन्दा झण्डै तीन गुणा बढी मोटाएको एक जँगली बाँदरलाई पक्रेर डाइटमा राखिएको छ। ‘अंकल फ्याट’ उपनाम पाएको सो बाँदरको फोटो सोसल मिडियामा भाइरल भएपछि पक्रिएको बताइएको छ।
जेलमा लिंग परिवर्तन गरेकी चेल्सीले पहिलो फोटो सार्वजनिक गरिन्
५ जेठ - गोप्य दस्तावेज सार्वजनिक गरेको आरोपमा ३५ वर्षको जेल सजाय पाएकी चेल्सी म्यानिङले जेलमुक्त भएपछि आफ्नो पहिलो फोटो इन्स्टाग्राममा सार्वजनिक गरेकी छन्। लिंग परिवर्तन गरेर चर्चित बनेकी र सात वर्ष जेलमा बिताएकी चेल्सी म्यानिङलाई ह्वाइट हाउसबाट विदा...
जब पुटिनले सी जिनपिङको घर पुगेर पियानो बजाए
३१ बैशाख - ‘वान बेल्ट वान रोड’ फोरममा भाग लिन चीनको राजधानी बेइजिङ पुगेका रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पियानो बजाएको भिडियो चर्चित बनेको छ।
चुनावबारे चर्चित १५ भनाइ
३० बैशाख - हामीकहाँ चुनावको माहौल छ। लोकतन्त्रको प्रमुख आधार मानिने स्वतन्त्र चुनाव निकै पहिलेदेखि बहसको विषय बन्दै आएको छ। लिंकनदेखि लिएर मार्क्ससम्मका विद्वानहरुले यसका बारेमा अनेक टिप्पणी गरेका छन्। कसैले प्रशंसामा शब्द खर्चिएका छन् भने कसैले निर्वाचन...